Degso Shazam loogu talagalay Windows
Bilaash Degso loogu talagalay Windows (8.00 MB)
Iyada oo leh 15 milyan oo isticmaaleyaal firfircoon maalin kasta, Shazam waa habka ugu dhaqsaha badan uguna fudud ee lagu heli karo muusig cusub. Codsiga muusigga caanka ah, oo gebi ahaanba bilaash ah, wuxuu aqoonsan yahay muusigga hadda ciyaara waqti gaaban wuxuuna kaa caawinayaa inaad barato magaca heesta aad xiisaynayso. Waxa kaliya oo ay tahay inaad sameyso waa furitaanka Shazam app oo taabo astaanta Shazam. Way fududahay in la helo muusikada aad raadineyso.
Iyada oo leh Shazam, oo hesha heesta gadaasheeda ku ciyaareysa ilbiriqsiyo gudahood, waxaad si dhakhso leh u iibsan kartaa heesta, u fiirin kartaa fiidiyaha YouTube -ka, oo aad ula wadaagi kartaa sumcadaha shabakadaha bulshada. Kuwaas ka sokow, waxaad akhrin kartaa dib -u -eegista albumka iyo taariikh -nololeedka fannaaniinta aad ugu jeceshahay, oo aad ku ogaato muusig cusub adoo baaraya raadadka ay dhageysteen isticmaaleyaasha kale ee Shazam.
Waxa kale oo suurtogal ah in la isticmaalo Shazam inta codsi kale furan yahay ama marka la fuulayo internetka. Waxaad ku samayn kartaa tan mahadnaqa muuqaalka Snap View feature ee Windows 8. Codsadaha heesaha muusiggan, kaas oo u shaqeeya si waafaqsan kombiyuutarada Windows 8 iyo kiniiniyada iyo sidoo kale aaladaha leh Windows 8.1, ayaa ah mid wax ku ool ah oo musharrax ah inuu ka mid noqdo codsiyada caadiga ah.
Cabirka Faylka: 8.00 MB
Horumar: Shazam Entertainment